Antony ny tsy maintsy hampahafantarana mialoha amin’ireo mpampiasa ny lalana rehetra sy ny mombamomba izany mba hiomanana ary indrindra tsy hiteraka fahasorenana amin’ny tsirairay. Nilaza izy ireo fa tsy maintsy hisy hatrany ny fahatapan-dalana amin’ny ampahany na ny manontolo mihitsy. Raha mahakasika ny LOT N°3 Iavoloha – Anosy izay mirefy 11Km dia 20%n’ny asa no efa vita ary hatao tara (goudron) manontolo izany ka hitarina 3 ny lalana Anosy-Soanierana. Ovaina rarivato (beton) avokoa ny sisin-dalana ary 1,30m ny sakan’izany, hisy ihany koa ny fametahana takelaby, arofanina sy baorina. Tahaka izany ihany koa ny LOT N°4 Anosy-Ampitatafika-Itaosy mirefy 12 Km izay vao 10%n’ny asa no vita ka hatao lalana 3 ihany koa Anosizato-Ampitatafika. Ankoatr’izay dia hisy ny fandiovana sy fanamboarana ny sisin-dalana Ampasika-Itaosy sy Avarabohitra sy Antanimenakely hatrany Andranonahotra. Izany rehetra izany no tsara ho fantatry ny vahoaka hoy izy ireo ary nitondra ny teny fialan-tsiny ny amin’ny fanelingelenana sy ny vokatra aterak’izany ireo orinasa. Sarotra ny asa hoy izy ireo ary maro ny ratsamangaika tahaka ny kaominina sy ny polisy no efa manao ny ezaka amin’ny fandaminana rehetra. Misy ampahan’asa tsy maintsy hatao amin’ny alina ihany ary haharitra efa-bolana ny fanamboaran-dalana amin’ireo LOT lehibe 2 ireo.